२०७४–चुनाव – Page 220 – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
क्रान्तिकारी माओवादी ३ नं. प्रदेशद्वारा श्रद्धाञ्जली व्यक्त
काठमाडौं । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का ३ नं. प्रदेश सचिव सागरले एक शोक वक्तव्य जारी गर्दै पार्टीका केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर बोगटी ‘बसन्त’का हजुरबुवा भुपालध्वज बोगटीको ८२ वर्षको उमेरमा भएको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै दिवंगत बोगटीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभएको छ । सोमबार जारी गरिएको उक्त शोक वक्तव्यमा ओखलढुंगा चम्पादेवी गाउपालिका वडा नं. ३ निवासी दिवंगत बोगटीको […]
प्रधानन्यायाधीश पराजुलीका विरुद्ध अनसन थालेका डा.केसी पक्राउ
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै अनसन थालेका त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्रा.डा. गोविन्द केसीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । न्यायाधीश डम्बर बहादुर शाहीको एकल इजलासले अदालतको अवहेलनाको मुद्दामा केसीलाई मंगलबार बिहान ९ बजे अदालतमा उपस्थित गराउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएलगत्तै प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । डा. केसीले संविधान र कानून बमोजित सर्वोच्च अदालत र […]
सबैखाले अवसरवादका विरुद्ध संघर्ष गरौं !
१. विषय प्रवेश यतिवेला विश्वस्तरमा कम्युनिष्ट आन्दोलन उभारका रुपमा अगाडि बढ्न सकेको अवस्था छैन । तर कमजोर अवस्थामा नै भए पनि दर्जनौं देशहरुमा कुनै न कनै तरवरबाट अगाडि बढिरहेकै छ । खास गरी रुस र चीन जस्ता विश्वका ठूला देशहरुमा सर्वहारा वर्गको हातमा आएर पनि प्रतिक्रान्तिमा बदलिनु र अन्य कतिपय देशहरुमा समेत क्रान्तिले हार खानुले […]
झर्रोटर्रो : प्रेत पाटीको वकपत्र
गएको हप्ता पञ्चप्रेतहरूको पाटीको बैठक बस्यो । १९ गते बसेर २१ गते उठेको पञ्चप्रेतहरूको पाटीको बैठकले चुनाउ हार्नुको कारणबारे डोजर लगाएरै उत्खनन् ग¥यो । सरकारको उपर्धानमा बाहाल भएरै चुनाउ लड्दा पनि प्रेत पाटीले जीवनभर तङ्ग्रिनै नसक्ने गरि हार व्यहोर्नु परेपछि हुनसम्मको पिर परेको छ । चुनाउमा सर्मनाक पराजय भोग्नु पर्दा थिलथिलो हुनेगरि थला परेको प्रेत […]
कंचनपुरमा अखिल (क्रान्तिकारी)को संगठन विस्तार तीव्र
कंचनपुर । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) निकट अखिल (क्रान्तिकारी) कंचनपुरले संगठन विस्तारलाई तीव्रता दिएको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार हालै संगठनले जिल्लाका विभिन्न स्कूल तथा क्याम्पसहरुमा संगठन निर्माण गरेको छ । हालै भएको विध्यार्थीहरुको एक भेलाले जिल्लाको जनशिक्षा उमाविमा सृष्टी ऐरको अध्यक्षतामा संगठन निर्माण गरेको छ । त्यसैगरी उक्त स्कूल इकाइ कमिटिको उपाध्यक्षमा पुस्कर जोशी, सचिवमा […]
युवा स्वभावैले क्रान्तिकारी हुन्छन् । क्रान्ति परिवर्तनका लागि गरिने संघर्ष हो । ती संघर्षहरुमा युवाहरुको अतुलनीय योगदान रहँदै आएको छ । यथास्थितिका विरुद्ध विद्रोहचेत युवाहरुको मूल चरित्र अर्थात् विशेषता हो । यसर्थमा सचेत युवाहरु इतिहासका चालकशक्ति पनि हुन् । र, क्रान्तिका संवाहक शक्ति । वर्गीय समाजमा सबै चिज वर्गीय हुन्छ । युवाहरु पनि स्वभाविक रुपमा […]
‘हामीले सङ्गठन र सङ्घर्ष दुवै क्षेत्रमा क्रमभङ्ग गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ’
(नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को ६ देखि १० पौषसम्म बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टी महासचिव मोहन वैद्य‘किरण’द्वारा प्रस्तुत तथा पारित तात्कालिक राजनीतिक प्रस्तावको अंशलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । –स.) १–वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति (क) देशमा हालै पश्चगामी राज्यसत्ता तथा व्यवस्था अन्तर्गत संसदीय निर्वाचनको नौटङ्की मञ्चन गरिएको छ । यस प्रकारको सत्ता तथा व्यवस्थामा आ–आफ्नो पकड बलियो बनाउनका […]
Posted in: २०७४–चुनाव, Bichar, Feature News, mainNews, National News
‘नयाँ जनवादी क्रान्ति छोड्ने र संसदीय व्यवस्था मान्ने कम्युनिष्ट हुन सक्दैनन्’
काठमाडौं । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का महासचिव मोहन वैद्य‘किरण’ले नयाँ जनवादी क्रान्ति छोड्ने र संसदीय व्यवस्था मान्ने कम्युनिष्ट हुन नसक्ने बताउनु भएको छ । क्रान्तिकारी माओवादी निकट अखिल (क्रान्तिकारी)को केन्द्रीय समितिको सचिवालयको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव किरणले यस्तो बताउनु भएको हो । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव किरणले एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका पार्टीहरुले नयाँ जनवादी क्रान्ति परित्याग […]
चुनाव, सुधार, स्थायित्व र समृद्धिबारे एक टिप्पणी
केही समय अगाडिसम्म नेकपा (माके)लाई एमाले बन्दै छ भन्दा ठूलो गाली हुन्थ्यो । अहिले त्यो यर्थाथमा बदलिएको छ । कुनै समय पुष्पकमल दहाललाई संसदवादी भन्दा ठूलो गाली हुन्थ्यो अहिले त्यसलाई तेरो मुखमा ‘दूध र भात’ जस्तै भएको छ । यसपालिको निर्वाचनमा कथित वाम गठबन्धनले सुधार, स्थायीत्व र समृद्धिको नारा लगाएर विजय प्राप्त ग¥यो । यो […]
Posted in: २०७४–चुनाव, Artha Jagat, Bichar, Tippani Bislesion
गोली हानी व्यवसायीको हत्या
बुटवल । रुपन्देहीको देबदहमा एक जना व्यवसायीको गोली हानी हत्या भएको छ । अज्ञात समूहले स्थानीय बलु भनिने बसन्त पौडेलमाथि गोली हानी हत्या गरेको हो । प्रहरीका अनुसार पौडेलको टाउकोमा गोली लागेको थियो । उनको लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । मोटरसाइकलमा आएको अज्ञात समूह गोली हानेर रोहिनी खोलातिर भागेको थियो । […]
Posted in: २०७४–चुनाव, Artha Jagat, mainNews, National News